"Ny iray manontolo dia mihoatra ny haben'ny ampahany ao aminy"
Raiso ny fitsapana ary tadiavo ho anao manokana
Ampidino ireo fanazaran-tena (maimaim-poana) ary andramo izany
Inona no manakana anao tsy hahatsapa ny nofinao?
FANAMARIHANA NY TENY & famoronana
Jereo ny fiteny lazain'ny fanahinao
Fifandraisana amin'ny tontolo tsy hita
Manantena aho fa hahita an'izay tadiavinao amin'ity tranonkala ity ianao. Mety hatsangana somary hafa noho ny antenainao na efa fanaonao amin'ny mpanelanelana na mpanazatra izany. Tsy dia mino ny fametrahana satroka milaza aho fa mpanelanelana amin'ny tontolo izao ary avy eo mpankafy crypto indray. Mifandray avokoa ny zava-drehetra ary mahazo aingam-panahy avy amin'ny lafim-piainana rehetra aho.
Hitako miaraka amin'ireo mpandray anjara ihany koa izany fa avela hitarika olana iray amin'ny fiainany aho. Tonga niasa tamin'ny X izy ireo saingy nahita fa tokony hojerena tsara i Y. Ny fanomezana izany dia ny fanandramana vokatra tsara amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainany. Ary marina izany! Tsy misy na inona na inona misaraka ary noho izany ny sary feno dia zava-dehibe. Aorian'izay vao afaka mamelana tanteraka ny fiainantsika.
Isika rehetra dia mihoatra ny ampaham-bidiny! Amin'ny maha-olona, ​​amin'ny fifandraisana, amin'ny fianakavianao na amin'ny namanao sy mpiara-miasa aminao.
mihainoa amin'ny iTunes
henoy amin'ny alalan'ny Spotify
mihainoa i Deezer
Drafitra B - Bitcoin ny ho avintsika
Iza moa i Edwin?
Fisaintsainana sy fahatsiarovan-tena
Endrika fisaintsainana 2
Misaintsaina tsara kokoa miaraka amin'ny Brainwave Entrainment
Manasitrana amin'ny fisaintsainana ny volana feno
Mantras avy amin'ny bodisma
Ny mantra "Vajra Guru" avy any Padmasambhava
Ireo chakra 7 an'ny vatantsika etherika
Basic chakra resonance fisaintsainana
Ny medaly plexus chakra resonance
Mihetsi-po lalina resak 'ny chakra
Ny moka chakra resonance meditation
Fahatelo-maso resahana ny chakra resahina
Olona mora tohina (HSP)
HSP - Fankasitrahana avo lenta
Toetra mampiavaka ny olona ambony Sensitive
Olona sarotiny tena ve ianao? Raiso ny fitsapana hsp
Ny fahatsapana ambony ao amin'ny toeram-piasana
Talenta 5 an'ny mpiasa be pitsiny
Ampidiro ny fifampidinihana antonony
Manome porofo amin'ny alàlan'ny fahitana mazava
Fanasitranana, fitenenana ary zavakanto amin'ny alàlan'ny Trance
Edwin van der Hoeven CSNU, mpanelanelana ara-panahy
Fifandraisana sy ny tahan'ny
Tsy misy vokatra ao anaty lisitry ny entanao
€0.00 ny hovidiana
Edwin van der Hoeven - HSP / fahatsapana avo, ara-panahy ary fifandraisana amin'ny olona
Araka ny nolazain'ny Buddhists: ny olona rehetra dia manana zavatra iraisana ary izany dia 'ny mitady fahasambarana'. Ny famaritana ny fahasambarana dia manana fomba fiteny maro; vola bebe kokoa, bika tsara, mpiara-miasa mamy, fahombiazana, fahasalamana, fahalalahana, famoronana sns.
Afaka mitady fahasambarana ivelan'ny tenanao na ao aminao ianao.
Betsaka ny olona any amin'ny tany tandrefana no mifantoka amin'ny fahasambarana ivelan'ny tenany, na izany aza, ny traikefa dia mampiseho fa matetika izany dia manome fahafaham-po vetivety ary manomboka mitady ny tsindry manaraka ianao. Rehefa mamboly fahasambarana anaty ianao no manana fanjakana izany dia be fitiavana sy mahery, mitazona ny sainao hifantoka ary manome aingam-panahy ho an'ny fahombiazanao manokana.
Avelako ho anao tanteraka ny fiainanao ivelany. Te hanampy anao amin'ny fambolena fahasambarana anaty aho, hampiofana ny saina sy ny fiteninao.
Mahafantatra bebe kokoa? Tonga amin'ny toerana mety ianao ... miaraka am-pitiavana, Edwin
Fiofanana manokana 85 € / 90min.
Moa ve ianao mahita zavatra any am-piasana, manana olana amin'ny firesahana momba ny zavatra tsapanao sa mila fanohanan-kevitra amin'ny fivoaranao manokana na ara-panahy ianao? Manome taratra anao aho, manosika anao hiala ny faritra mampionona anao izay ilaina ary manampy anao hijery ny tenanao amin'ny fomba tsara sy manorina.
Fakan-kevitra antonony 50 € / 45min.
Amin'ny maha mpanelanelana ahy, nohamarinin'ny SNU, dia manome consultations miorina amin'ny fomba anglisy aho. Midika izany fa tsy mila mitondra zavatra toy ny sary na firavaka ianao. Mifandray amin'ilay te-hifandray amin'ny tontolon'ny Fanahy aho ary manome porofo betsaka araka izay tratra mba hanafoanana ny fisalasalana.
Fanasitranana ara-panahy 20 € / 25min.
Miaina ny vokatra manazava amin'ny fanasitranana ara-panahy ho anao. Ny fitsaboana dia maharitra 25 minitra izay ahafahako mirona amin'ny tontolon'ny fanahy mba hahafahako mampita ilay fanasitranana.
Fampahalalana momba ny fihenam-bidy amin'ny taha vind je hier.
Lahatsoratra farany indrindra
Bitcoin sy ny ara-panahin'ny varotra
Ny resaka ara-panahy sy ny vola indraindray dia toa mifanipaka. Amin'ity horonantsary voalohany ity dia manazava aho fa afaka mianatra zavatra betsaka momba ny tenanao tokoa ianao rehefa mifanakalo amin'ny stock na cryptos. Mampianatra anao momba ny faharetana, ny fifantohana, ny tahotra, ny tetika sy ny toetra maro hafa izay azo ampiasaina amin'ny fiainana lehibe izany.
Tsy maintsy mikoriana ny fotoanan'ny krizy
29 aprily, 2020
Toy ny rano ny vola ary tsy maintsy mikoriana malalaka. Ny lehilahy dia tranobe mpanelanelana ihany amin'ity tohana mitohy ity. Noho izany, mamboly fahalalahan-tanana mba ahafahanao mamela ny natiora hanao ny asany.
Momba ny fahatokisana ny fivavahana marina
8 aprily, 2020
Ny fahatokisana dia aseho amin'ny fifaliana tsy misy farany fa tsara avokoa ny zava-drehetra araka ny tokony ho izy. Ny hany azonao atao izao dia ny mahatsapa ny fiainana.
Ny fahatsiarovan-tena dia tapakilanao amin'ny fiainana mamorona
18 martsa, 2020
Ny fahatakarantsika ny saina dia fomba iray hahatsapanao ny avo kokoa sy ny haben'ny fahatsiarovan-tena sy ny fiainana. Inona no tianao? Arakaraka ny fahatakarantsika ny fahafahantsika mamolavola ny fiainantsika. Amin'ity fomba ity dia afaka mampiasa ny fahatsapanao ianao mba hanana fiainana tsara sy mamorona.
Fomba fahitana tena marefo
Tena saro-pady ve ianao? Avy eo ny atidohanao dia mandefa fampahalalana momba ny fahatsapana bebe kokoa ary mandinika izany bebe kokoa ianao Ny zavatra tsapanao dia mahery vaika kokoa, sarotra kokoa, mikorontana kokoa ary mahatsapa zavatra haingana kokoa ianao amin'ny maha-vaovao na hafa azy; mandrisika anao kokoa ny aingam-panahy noho ny olon-tsotra.
Mazoto ianao ary feno faharetana
10 Jolay, 2019
Tonga eo amin'ny toerana alehanao ianao
8 Janoary, 2020
Iza na inona ny HSP?
Fanontaniana 9 napetraka matetika
Ataovy ny fitsapana
Fisaintsainana & fanentanana
Rehefa miresaka momba ny fivoaran'ny fahatsiarovan-tena ny olona dia ny 'fisaintsainana no'fahatsiarovan-tena'. Ny fanjakan'ny fahatsiarovan-tena amin'ity lafiny ity dia mihoatra ny fomban-drazana izay manome antsika fomba hanatanterahana azy fanjakana ho avy. Nandritra ny taona maro dia matetika aho no tsy nampianatra fomba amam-panao manokana, fa fomba hanatratraranao toe-tsaina misaintsaina. Ho fanampin'izay, manampy ny olona hiaina ny herin'ny mistery my mantra aho amin'ny alàlan'ny fanaovana ny mantra azy manokana na amin'ny fampiasana, ohatra, ny Vajra Guru mantra avy any Padmasambhava.
Samy hafa daholo ny zava-drehetra
19 Janoary, 2020
Ny fisainana no mpamily ny fahitana fahitana roa, raha mifoka rivotra, etsy an-danin'izany, manome toerana anao hifandraisana amin'ny avo kokoa. Ny fisaintsainana dia mianatra mamela ny handehanana dia ao amin'ny Ankehitriny. Ny Now Now tsy mahalala toerana sy fotoana, tsy ianao sy izaho. Amin'izao fotoana izao dia iray ihany ny zava-drehetra!
Zavatra misaintsaina 5 izay manampy anao hifantoka
6 Janoary, 2020
Ny fisaintsainana dia tsy dia sarotra loatra, indrindra amin'ny fanampian'ny zavatra iray hifantohana aminao dia hiaina ny fomba anampian'ny fanampiana anao hahita ny fiadananao anaty.
Entina mifono vy
€4.99 €0.00 Ao anaty harona fanatobiana
€4.99 €2.49 Ao anaty harona fanatobiana
ataovy lohalaharana ny tenanao
Inona no atao hoe fahitana anao manokana, ny filozofianao? Ny asanao ve zava-dehibe amin'ny fahasambaranao, ny tranonao, ny fialam-bolinao, ny olon-tianao ary ny fianakavianao na mitady traikefa ... tianao ve ny mandeha ary tianao ny mahita zava-baovao tsy tapaka? Raha ny hevitro dia tsy misy valiny marina na diso, fa iray ihany no valiny marina; anao manokana. Miaina ny nofinao ve ianao? Na tsy azonao antoka ny fomba hanombohana sy ny toerana hanombohana. Angamba afaka manome aingam-panahy anao ireo lahatsoratra ireo ... fanombohana.
Oviana ianao no nahita farany teo?
Ny fampandrosoana ara-panahy dia momba ny sary lehibe ary ny fahatanterahan-tena tsy mamela safidy! Mihaona amin'ny tenanao ianao ary noho izany dia tsy mora foana na mahafinaritra satria mahita ampahany amin'ny tenanao ianao, amin'ny tenanao, izay mety hifanandrina.
Rehefa misalasala dia tsy hiakatra
Inona no ilaina hialana amin'ny fisalasalana? Raha hijery indray izay afaka manome fiarovana anao. Hanidy ny masonao amin'ny tontolo ivelany anao ary hiditra. Ianao irery no afaka manome toky anao amin'ny fiainana.
Angovo inona no mahasarika anao?
3 Febroary, 2020
Ny famantarana zodiakanao dia milaza zavatra momba ny herin'ny angovo rehefa teraka ianao. Ny famantarana zodiakanao dia manombana! Ao amin'ity bilaogy ity dia te hanazava ny fomba mety ho fiantraikany aminao amin'ny alàlan'ny olona iray ireo kintana ireo.
Mitsangàna aorian'ny fahalavanao ary manohy mandeha
Ny mamela ny lasa dia ny zavatra rehetra ataonao ihany. Aza manandrana mihazona izay tsy anompoanao intsony. Ny vovoka ao aorianao dia hianjera mandra-pihaviana fa hatsangana indray avy amin'ny mpikaroka manaraka. Tsy misy na inona na inona mijanona, tsy misy na iray aza, maninona no tsy mitovy ny aminao. Koa mitsangàna ary mandehana, tohizo ny fiainanao ary aza mitohy ny alahelo. Avelao ny alahelo hahatsapa alahelo, fa mba jereo ihany koa ny fanamaivanana ho fotoana fohy hitohizany.
Mediumship dia fahaizana voajanahary amin'ny fahatsapana fahatsapana mazava tsara izay ahafahanao mifandray amin'ny fahatsiarovan-tenan'ny maty. Tsindrio eto raha mila fanazavana fanampiny >
Ny tantara momba ny Fanahy izay mitondra mankany amin'ny traikefa finoana
22 Janoary, 2020	Tsy misy valiny
Ny tontolo ara-panahy dia manan-tsaina ary mahalala ny fomba sy rahoviana mba hisarihana ny saina. Tsy ny handresy lahatra anao fotsiny fa vao maika hanao hihena ny finoana hany ka malalaka kokoa ianao amin'ny fahagagana fiainana.
Fifaliana no fivavahana!
Novambra 21, 2019	Tsy misy valiny
Tsy fivavahana 'a', fa ny fifaliana dia fivavahana! Tsy haiko ny momba anao, fa rehefa mifanena amin'ny namako akaiky aho dia mahafaly ahy izany.
Edwin dia amin'ny Anglisy Fikambanam-pirenena ara-panahy (SNU) voamarina momba;
Training an'ny haino aman-jery
Voarakitra ho mpampianatra ao amin'ny CRKBO izy.
Ny tsiambaratelo sy ny zo
Cookie fanambarana (EU)
Cookie fanambarana (US)
Raiso ny takelaka
© Ny fampahalalana amin'ity tranokala ity dia natambatra tamim-pitandremana lehibe, na izany aza dia misy lesoka na tsy fahatomombanana foana; tsy misy zo azo avy amin'izany.
nataon- ❤ by Miampy lanja - Edwin van der Hoeven
sy fisakafoana hariva
Tsindrio ity kisary ity eo amin'ny menio ankavanana ambony hanokafana ity pop-up ity
Henoy eto ny fisaintsainanao isan'andro
Jereo ihany koa ity fisaintsainana ity IRAY ISIKA (azonay.io)
Betsaka ny olona manana izany maimaimpoana izany Crown Chakra fisaintsainana ny fisaintsainana alaina hisaintsainana mandritra ny volana feno. Fantatrao ve fa ny toerana misy ny volana dia mifandray amin'ny Chakras? Ary noho izany dia misy fisaintsainana resonance 7 samihafa, iray isaky ny Chakra.
Ity pop-up ity dia mampiseho ny fisaintsainana mifandraika amin'ny toerana misy ny volana ankehitriny.
HSP sy fahatsapan-tena
Fahitana momba ny fiainana
Alefaso amiko ny fampahalalana bebe kokoa